PeerTube 3.3 inouya nerutsigiro kugadzirisa peji repamba uye zvimwe | Kubva kuLinux
PeerTube 3.3 inouya nerutsigiro kugadzirisa peji repamba uye nezvimwe
Munguva pfupi yapfuura kuburitswa kweshanduro nyowani yePeerTube 3.3 yakaunzwa uye mune iyi vhezheni nyowani senge chinhu chitsva chinoratidzwa, ndiyo iyo mukana wekugadzira peji yemuno peji kune yega PeerTube muenzaniso. Izvi zvinobvumidza semuenzaniso mamaneja kuratidza zvakajeka kuti yavo muenzaniso ndeipi, ndezvipi zviripo zviripo, mabhaisikopo kana kukurudzira sarudzo dzemukati (isina-yakazara runyorwa).
Kana zviri zvimwe shanduko zvakare zvinomira kubva mushanduro nyowani, tinogona kuona kuti vanogona kutove shandisa zvikamu zvishomanana, pamwe nerutsigiro rwe playlist, pakati pezvimwe zvinhu.
Kune avo vasingazive PeerTube, vanofanirwa kuziva kuti izvi inopa mutengesi-yakazvimirira imwe nzira kune YouTube, Dailymotion, uye Vimeo, uchishandisa zvirimo zvekuparadzira netiweki zvichibva paP2P kutaurirana uye kubatanidza vashanyi mabhurawuza.
PeerTube inoenderana nekushandiswa kweBitTorrent mutengi, WebTorrent, iyo inomhanya mubrowser uye inoshandisa tekinoroji WebRTC kuronga P2P yekutaurirana chiteshi cross-browser yakananga, uye iyo ActivityPub protocol, iyo inobvumidza akaparadzanisa mavhidhiyo maseva kuti asanganiswe kuita yakajairwa federated network, umo vashanyi vanotora chikamu mukuburitsa zvemukati uye vanokwanisa kunyorera kuzviteshi uye kugamuchira ziviso nezve mavhidhiyo matsva.
Iye zvino, pane zvinopfuura mazana mapfumbamwe emaseva ekugamuchira zvemukati, Inotsigirwa nevanozvipira vakasiyana siyana nemasangano. Kana mushandisi asina kugutsikana nemitemo yekutumira mavhidhiyo kune yakatarwa PeerTube server, vanogona kubatana kune imwe server kana kutanga yavo server.
Main nyowani maficha ePeerTube 3.3
Mune ino vhezheni nyowani inoratidzwa yePeerTube 3.3, sezvatakambotaura pakutanga, hutsva hukuru ndiyo kugona kuumba yakajairwa peji remba kune yega PeerTube muenzaniso.
Nayo pane peji rekumba, ruzivo nezve saiti runogona kunyorwa, zvirimo zviripo, chinangwa uye kunyorera. Chaizvoizvo inogona kuiswa:
mutambi wakavakirwa-mukati wemavhidhiyo kana playlists
vhidhiyo, playlist, kana chiteshi thumbnail
runyorwa rwekuvandudzwa rwe mavhidhiyo (nekwaniso yekusefa nemutauro, chikamu ...)
Kunze kwaizvozvo zvinokwanisika kusanganisa mabhatani, vhidhiyo player, playlists, vhidhiyo zvigunwe uye makwara pane peji.
Uyezve, iyo yakavakirwa-mukati vhidhiyo zvinyorwa zvinowedzeredza otomatiki. Kuwedzera peji rekumba kunoitwa kuburikidza neDhairekitori / Zvirongwa / Menyu peji peji muMarkdown kana HTML fomati.
Imwe yeshanduko inomira mushanduro iyi nyowani ndiyo tsigiro yekutsvaga zvinyorwa, izvo zvino zvave kuratidzwa mumhedzisiro yekutsvaga paunenge uchitsvaga PeerTube uye kana uchishandisa iyo Sepia yekutsvaga injini.
Kunze kwaizvozvo zvakare akawedzera rutsigiro rwekutumira mapfupi maficha kune mavhidhiyo uye zvinyorwa kutamba, kunyangwe iwo asina kupfupikiswa ma link, izvo zvakaitwa yaive shanduko mune default vhidhiyo zvitupa (maGIDID) Mavara makumi matatu nematanhatu uye zvino inogona kuburitswa mune makumi maviri nemaviri mafomu uye panzvimbo penzira "/ mavhidhiyo / tarisa /" uye "/ mavhidhiyo / tarisa / playlist /", akapfupikiswa ne: "/ w /" uye / w / p / ".
Kune rimwe divi, isu tinogona zvakare kuwana izvo kuita kwekugadzirisa kwaitwa, iyo inobvumidza kukwanisa kutora ruzivo rwevhidhiyo ikozvino zvakapetwa kaviri, kuwedzera kune izvo kuita kwacho kwakagadziridzwawo mumibvunzo yakabatana. Basa riri kuitwa kuti rione matambudziko mumasisitimu ane huwandu hukuru hwevashandisi, mavhidhiyo uye kubatana nemamwe mapfundo.
Izvo zvinoonekwawo kuti chinongedzo chakashandurwa pamitauro yeRTL (kubva kurudyi kuenda kuruboshwe) chakagadzirwa, icho PeerTube ikozvino inotsigira iyo RTL dhizaini kana iwe ukagadzirisa PeerTube interface mune imwe yemitauro kubva kurudyi kuenda kuruboshwe. Iyo menyu inofamba ichienda kurudyi uye zvigunwe zviri kurudyi.
Pakupedzisira, kana iwe uchifarira kuziva zvakawanda nezvazvo nezve iyi nyowani vhezheni yePeerTube kana zvakajairika nezvayo, unogona kutarisa ruzivo Mune inotevera chinongedzo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Applications » PeerTube 3.3 inouya nerutsigiro kugadzirisa peji repamba uye nezvimwe
Gixy, Pandora, Pire, Porto uye Rep: Yandex Vhura Source - Chikamu 2
Apprepo: Imwe dura rewebhu kurodha pasi maapplication muAppImage fomati